Awamirta - Kaniiniga ilmo iska soo ridid
Kaniiniga ilmo iska soo ridid
Waxyabahe ilma iska soosarida
Waxyaalaha u baahan in fiira gaarah lasiiyo
Cilada uu leyahay
hadaad u baahatid akrbaara dheraad ah anaga nakhuseeya
Awamirta Awaamirta adegsiga kiniinada Maafebriston iyo Miisbriistool
Awaamirta 1aad : liqha kinka Miifebriistoon oo 200 oo mikrogram ah. Kadb marka la liqo kiniinka waxaa dhickarta in uu dhiig kaayimaado. Dhacdaadanina waa mid caadi ah marka laliqo kiniinkanii.
Awaamirta 2aad : sugida waxa muqankara kadib qaadashada kinika oo ah 24 sacadood amaba 48 sacadood.
Ka hor qaadashada kiniinka Miisobroostool waa in aad sugtid 24 sacadood, balse loomabaahna in aad sogtid 48 sacadood. Kadib marka la qaato kiniinka oo la sagaaga natiijada waxa laqaban karaa hawlaha caadiga ah ee xanaanaynta ubadka, cuno karinta, shaqa aadida amba dagsiga waxbarashada oola’aado
Awaamirta 3aad : qaadashada 4 xabadood oo kininka 200 ee mikrogram ee misoobroostol. Kinkaana 2 siyaabo ayaa loo’adegsankaraa adegsiga koobaad ee misoobroostol ayaa in kiniinada la’iska galiyo ibta oo uu adegsiga kale uu gahay kan ciridka hoostiisa lagashado. Adegsiga labadan noocaba ma’lihin waxa cafimaaddara ah.
Adegsiga kiniinka misobrostol ee ibta lagaliyo:-
In kacmaha ladhaqdo kadida dabadeed. Gacmahaaga saamuun iyo biyo ku dhaq.
Dabarka ujifso 4kiini iskagali ilmagaleenka adiga oo farta kurixaaya in ka dheer fartaada hakusiiriixin kiniinka. Kiniinkan marka ibta kaadi mareenta lagalinaayo looma baahino in hoos loosiigaliyo gaar ahaan melo dhaafisiisan fartaadu halka ay gaadho.
30 daqiiqadood dhabarka ujiif
Adegsiga kinkan misobrol:-
Afka si uuna kuu engegin cab inyar oo biya ah conka sare 2 kiniin gasho 2 dakalana canka haase dhigo
Kanka ka hay kiniinadan ilaa 30 daqiiqadood. Kiniinkaniin marka uu rado waxa uu yelankara dhandha sida chooka oo kale iyada oouu afku ku qalalikaro. Muda 30 daqiiqadood loomabaa no in laqaato wax cana ah amba biya ah.
30 daqiqadood dabadeed kiniika qoyay ee afkaaga ku haday biyo kuluqo oo loqo
Marka danbe maxaadhikara?
Intabadan 1-2 sacadood gudaheeda ayaad daremi karta xanuun turqin ah dabadedna uu dhiig kaa imankaro markaas iinta kartidaada wax cab amaba waxna cun intaa uu xanuunku kaatagaayo fadlan ku sugnaw mel gaarah amaba ay hawenku kusugan yhiin.
Kadib marka aad adegsatid kiniinada miifebriiston iyo misbroostool ee ilmaha la’iskaga soo saaro loomabaahankaro taagero kalkaaliyo caafimaad. Iska hub in aad qabtid dareenka qofka uurka lehe, caafimaadfiican, iyo in uun jirin dhigbax badan. Kiniinadani inkastay yihiin kuwa la’iskuhalaynkaro, hadan hayada cafimaadka aduunka ayaa cadaysa inshaqaalaha cafimaadka lalakashankaro marka ay dhacaan xanuuno ay kamidyhiin:-
Xanuuno aan kalajoogsi lahayn hadii aad iska dareentid xanuun nocani ar oo laba to dobaadah aad xarumaha caafimaa aka
laba todobaad Kadib markaad isticmaashid kininka ilmaha la’iskaga soorido haadaad dareentid xaalada la’iska arka marka uurka.
Diiga kaabaxaaya hadii u yahay mid qiyaas li’iah oo 2 todobaad kabadan kaasocda
Kadib marka uu ilmaha uurku kaasoobaxo ilaa 2 todobaad waxa la’iska daremikaraa uur, maadamu u wali jidhkaaga kusiijiro hormoonka uurka, sida adkaanshaha naajis, sidaasi awgeed waxa haboon in lalakaashado dhakhaatirta
Awaamirta adegsiga kininka misobroostool ee gaar loo qaato
Si loofulyoo awaamirtan waa in la qaato 12 xabadood oo kininka misoobroostool oo midkiiba ah 200 oo mikrogram. Kiniinada 2 siyaabo ayaa loo’isticmaalikaraa, kuwan oo kala ah, galinta ilmagaleenka iyo kuhaynta ciiridka hoose. Isticmaalida 2 nooc waa kuwa waxtar lehe
Awaamirta 1aad:- isticmaalida marka hore 4 kinin
Hadaad rabtid in aad kiniinadan u istemaashid galinta lbka dumarka marka hore iskuday in aad kaadiid, adga oo kacmahana iskamaydhaaya kiniinadan fartakuriix oo hoos ugali ilmagaleenka. Gacmahaaga saamuun iyo biyo ku dhaq. Adiga oo farta ka riixayo. Lomanabaa baahin in ka dheer farta in aad siigalisid ilmagalenka in ka dheer farahaaga. Kiniinkan marka ibta kaadi mareenta lagalinaayo looma baahino in hoos loosiigaliyo gaar ahaan melo dhaafisiisan fartaadu halka ay gaadho. Ilaa 30 daqiiqadood dhabarka ujif hadii aad door bidiid in aad kiiniinadakanka gashatiid.
labalaba xabo gashalabadaad ciird ee hase adiga oo ilaa 30 daqiiqadood canka kuhaynaaya. Waxa lagayaaba in aada dareentiid dhandhan sida chooga, islamarkaana uu afiku ku qalinco. Kadib marka aad kiniinka qadaatit dabadeed ilaa 30 daqiiqaadood lomabaahina in aad qaadatiid biyo iyo cunaba marka u wakhtiga dhamaada intaad biyo kuluqluqatiid liq waxii kiniin ah ee afikaaga kuhadha.
Awaamirta: intaadan kudhaqaaqin hawlaha awaamirta 2aad kahoor 3-4 sacadood sugi adiga oo 4 kiniin oo dheraad ah qaadanaaya fulii wixii aada samaysay wakhtigii fulinta
Hadii aad door bidiid kiininadan in aa ilmagalenka galisid 30 daqiiqadood dabarka u jiifso hadaad canka hoose gashtiidna 30 daqiiqadoodo canka ku hay dabadeedna laqu luqo oo liq 2T hirgalinta awaamirta 3 xaad kahoor sugi 3-4 sacadood
Awaamirta 3aad:- adiga oo ugudanbeega fuli dhama awaamirta aad safulisay marka hore. Hadaad doorbiday in aad kiniinka galisid ibtaada 30 daqiiqaadood dhabarka u jiif hadaad canka hoos galiisidna 30 daqiiqadood ku hay cakan dabadeedna laqa luqo oo liqq inta kiniinka ee afikaaga ku hadhay.
Marka danbe maxaa xiga?
Intabadan 1-2 saco gudaheed waxa la’isku arka xanuun wareenah amba waxa kasoobix kara dhiig, qaado biyabadan, sidokale qaado cuno isku dhelitirsan adiga oo dhabarka u jiifa yarnasoo si aadan xanuun u dareemin qaado kiniinka obrofiin faahifaahin dheraad ah hadaad abaatid kabogo baga ka hadlaaga calamada Xanuunka la’iskadareemo.
Awaamirta 4aad latashiga xirfadalayaasha caafimaadka hidiidi aa gaar u qaadatid kiinka misbrostoolin
3 todobaad kadibi kalkaaliyasha amaba dhakhtarka kalatasho adiga oo isbaadhaya hubi in aad uur ledahay iyo inkale, hadii 4 agagaarka aad kunooshahay u ka jiro. Anitiraa sawinda adegso oo isbaadh. Waxa aan ku dhiirgalinaa dadka raba kiniinka in ay isticmaalaan in ay lakaashadaa xirfadlayaasha caafimaadka. Hadii aad kusugan tahay mel uu kamabnuucyahay ilama iska soorid ka doorbididna isticmaalka kiniinka dabadedna kaayimaado dhiig aan lamid ahayn kan caadada u tag xirfadlayaasha caafimaadka una sheeg in aad isku aragtay dhiig aan caadi’ahayn
Hadii aad calaada xanuunka hosta ku xusan aad iskadareentid latasho dhaqaatiirta
Hadii aad iska aragtid xanuun aankalago’I lahan hadii mado 2lood u kaajoogsanwayo xanuunka aad xarumaha cafimaadka
Kadib markaad kiniinka qaadatid hadaad iska dareentid arimo muujinaaya in aad uur leda hay
Dhiig qiyaas li’i ah oo aan kal jooqsi lahahay mudo 2toodobaad ah
Xasuusin lagayaabo kadi markaad qaadatid kiniinka I’laa 2 todobaad inaad yelaatid daren muujinaaya in aad uur ledahay wayo waxa wali dhiiga ka siijirkara hormoonka dareenka uurka, dareenka uurk waxa kamid ah nasara oo adkaada, yalaalugo iyo caajis, marka calamadahan la’iska arko waxa haboon in la’aado dhakraatirta si loola tashado
ဗၼာ စကား (Burma)
Iibsga kiniinada	Hadaad ubaahatid kininka ilama baahatid kininka ilama la’iskaga soorido lakaasho dhakhaatirta amaba xirfadlayaasha caatimaadka kiniinka hadaad rabtid in aad qaadatid, adiga oo isticmaalaya Emelka, laxidhiid shabakadaha u qaabilsan in ay kuu soodhawayso kiniinkan